देउवाले ज्योतिषलाई भने- ओहो, अझै ४ महिना! मैले के गर्ने त? :: Setopati
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, फागुन १९
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ज्योतिष पण्डित सुरेशचन्द्र रिजाल। तस्बिर स्रोत: ज्योतिष पण्डित रिजाल
प्रतिनिधिसभा बैठक नजिकिएका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ज्योतिष पण्डितबीच भेटघाट भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजे संसद बैठक आह्वान गरेकी छन्।
संसद बैठक आह्वान भएपछि सभापति देउवाले ज्योतिष पण्डित सुरेशचन्द्र रिजालसँग आगामी दिनबारे केही कुराकानी गरेका छन्।
रिजाल तिनै ज्योतिष हुन्, जसले २०७४ को निर्वाचनअघि देउवालाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ भनेका थिए।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गोरखाको पालुङटारमा आयोजित चुनावी सभामा ‘कांग्रेसबाट देउवा नै अन्तिम प्रधानमन्त्री’ भनेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट कैलालीमा देउवाले ओलीको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै आफूलाई ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ भनेको बताएका थिए।
राजनीतिक घटनाक्रम तीन वर्षमा बदलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा बदर गरिदिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा फेरि चर्चामा छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूह संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने तयारीमा छ। ओलीलाई हटाउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट फागुन १२ मा प्रचण्ड-नेपालले सभापति देउवालाई उनकै निवास बुढानिलकण्ठमा २० मिनेट भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव नै गरेका थिए।
नेकपा विधिवत् रूपमा नफुटेसम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ। नेकपाभित्र ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै समूहले देउवासँग कुरा गरिरहेका छन्। देउवा पर्ख र हेरको नीतिमा छन्।
नेकपाका दुवै पक्षका अनेक प्रस्तावबीच अलमलमा परेका देउवा र ज्योतिष पण्डित रिजालबीच मंगलबार भेटघाट भएको थियो। प्रसाद पुर्‍याउन भन्दै रिजाल देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए। त्यसै बेला कार्यकर्ताको भीडभाडबीच सभापति देउवाले ज्योषित रिजालसँग कुराकानी गर्न समय निकाले।
‘म सभापति देउवाजीको निवास गइरहन्छु। यो नियमितजस्तै भेटघाट हो,’ ज्योषित पण्डित रिजालले सेतोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक परिस्थितिले ज्योतिषसँग भेटको कुरा चर्चामा रह्यो। तर म देउवाजीको निवासमा प्रसाद पुर्‍याउन गएको हुँ, हात हेर्न होइन।’
प्रसाद दिएपछि देउवासँग आगामी दिनबारे केही कुराकानी भएको रिजाल बताउँछन्।
‘मैले मुख्य गरी चैत ३१ देखि असारसम्मको समय अलि सावधान हुनुपर्नेछ, महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा ध्यान दिनुपर्छ भनेको हुँ,’ सभापति देउवालाई भनेका कुरा रिजालले खोले, ‘औंला भाँच्दै ओहो चार महिना! भन्नुभयो। यत्रो समय मैले के गर्ने त भन्नुभयो। उहाँ हास्नुभयो पनि!’
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिएको र संसद बैठक पनि आह्वान भएका बेला अब के होला भन्ने जिज्ञासा सबैलाई भएजस्तै देउवामा पनि त्यसो चासो स्वाभाविक रूपमा देखिएको रिजाल बताउँछन्।
‘अब के हुन्छ भन्ने सबैलाई चासो छ,’ उनले भने, ‘उहाँ त कांग्रेसको सभापति, ठूलो जिम्मेवारी पनि छ। स्वाभाविक रूपमा भूमिका पनि बढेको छ। सभापति भएकाले पनि राजनीतिक घटनाक्रमलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी देउवाजीमा छ।’
मंगलबार देउवा निवासमा अलि भीडभाड रहेकाले आफू यसबारे कुरा गर्न फेरि बुढानिलकण्ठ जाने रिजाल बताउँछन्। ‘प्रसाद लिएर गएको थिएँ। त्यस बेला सामान्य कुराकानी भयो। अब फेरि जानुछ,’ रिजालले सेतोपाटीसँग भने।
ज्योतिष विज्ञानका अनुसार वैशाख १ देखि राजा र मन्त्री मंगल भएको आउने उनले उल्लेख गरे। एकै ग्रहले दुइटा भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले एकतन्त्रीय शासन पनि आउन सक्ने बताउँदै उनले चनाखो हुनुपर्ने सुझाव देउवालाई दिएका छन्।
‘वैशाख १ देखि राजा र मन्त्री मंगल भएर आएको छ। एकै ग्रहले दुइटा भूमिका निर्वाह गर्दैछ। एकतन्त्रीय शासन पनि आउनसक्छ। केही सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १९, २०७७, ०३:२४:००